Luis Rosales. Nyanduri wechizvarwa cha '36. Nhetembo Dzakasarudzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo weZvimedu zvekukanganwa
Luis Rosales ndomumwe wevananyanduri vakatanhamara ve Chizvarwa che36 uye ashaya nhasi makore 27 apfuura. Yakanga iri zvakare munyori wenyaya, nhengo ye Royal Spanish Academy uye kubva kuHispanic Society yeAmerica yezvidzidzo zvavo paSpanish Golden Age. Akakunda Cervantes Mubayiro en 1982 pabasa rake rese. Nhasi mundangariro dzake ndinosarudza idzi 4 nhetembo.
2.1 Nezuro kuchauya
2.3 Uye nyora kunyarara kwako pamusoro pemvura
2.4 Nekuti zvese zvakafanana uye iwe unozviziva
Akazvarirwa mukati Granada musi waMay 31, 1910. Akadzidza Philosophy, Tsamba uye Mutemo kuyunivhesiti kwake uye ku 1930 akaenda ku Madrid. Ikoko anoita shamwari nemazita akaita saLeopoldo Panero, Dionisio Ridruejo kana José García Nieto uye anotungamira iyo inonzi Generation ye36.
Zvake nhetembo dzekutanga dzakabudiswa mumagazini Mhepo ina, Muchinjikwa uye mutsetse, Vertex y Jongwe. Uye atova muMadrid anoburitsa bhuku rerudo nhetembo, April, uko simba re Garcilaso de la Vega. Imba iri pamusoro, rakabudiswa muna 1949, uye Dhayari rekumuka kuvakafa muna 1979 zvinofungidzirwa summit inoshanda.
Masikati achafa; mumigwagwa
ibofu rakasuruvara kana mweya unomira
pasi uye pasina mwenje; pakati pematavi akakwirira,
zvinouraya, zvinenge zvine simba,
zuva rekupedzisira rinogara; nyika inonhuhwa,
anotanga kunhuwa; shiri
ivo vari kutyora girazi nekutiza kwavo;
mumvuri kunyarara kwemanheru.
Ini ndanzwa iwe uchichema: handizive waunochema.
Kune utsi huri kure
chitima, icho chingangodzoka, iwe uchiti:
Ini ndiri kurwadziwa kwako, rega ndikude.
Kufanana nemaitiro ekurasa uyo akaverenga mafungu
izvo zvisipo kufa,
uye kudziverenga, uye kudziverenga zvakare, kuti zvidzivike
kukanganisa, kusvika kwekupedzisira,
kunyangwe iye ane chimiro chemwana
uye anomutsvoda uye anofukidza huma yake,
saka ndakagara nehungwaru husina kujeka hwe
kadhibhodhi bhiza muchimbuzi,
ndichiziva kuti handina kumbobvira ndakanganisa chero chinhu,
asi muzvinhu zvandaida zvakanyanya.
Uye nyora kunyarara kwako pamusoro pemvura
Handizive kana iwo mumvuri pagirazi, kana chiri chete
kupisa kunokanganisa kupenya; hapana anoziva
kana shiri iyi ichibhururuka kana kuchema;
hapana anomumanikidza neruoko rwake, kwete
Ndainzwa ichirova, uye iri kudonha
semumvuri wemvura, mukati uye unotapira,
kubva musango reropa, kusvikira ndarisiya
inenge yakasungwa uye yemiriwo, yakadzikama.
Handizive, zvinogara zvakaita seizvi, izwi rako rinosvika pandiri
semhepo yaKurume mugirazi,
sedanho rinofambisa keteni
kuseri kwekutarisa; Ndiri kutonzwa
kwasviba uye kunenge kufamba; Ini handizive kuti sei
Ndiri kuzosvika, ndichikutsvaga, pakati
yemwoyo yedu, uye ipapo kukuudza,
amai, zvandinofanira kuita chero ini ndichirarama,
usave nherera semucheche,
kuti usagare wega ipapo mudenga rako,
kuti murege kundishayiwa sekushayiwa kwandinoita
Nekuti zvese zvakafanana uye iwe unozviziva
Wasvika kumba kwako
uye ikozvino iwe unoda kuziva kuti chii chinobatsira kugara,
zvine basa rei kugara kunge munhu akarasa
pakati pezvinhu zvako zvakashata zvezuva nezuva.
Hongu, ikozvino ndinoda kuziva
Ndeipi kabhudhi inofamba-famba uye imba isina kumbobvira yabatidza,
uye Bethlehem reGranda
- Bheterehema iro raive mucheche patakange tichakarara tichiimba -
uye izwi iri ringave rei: izvozvi
iri izwi "izvozvi",
apo chando chinotanga,
apo chando chinokura muhupenyu hunogona kunge huri hwangu,
muhupenyu husina chiyeuchidzo chisingaperi,
iyo haina mangwana,
kuti haatomboziva kana yaive yekudyara, kana yaive yepinki,
dai raive ruva remaruva kumahusiku.
Ndinoda kuziva kuti runyararo urwu rwakandikomberedza nderwei,
kunyarara uku kwakafanana nekuchema kwevanhu vakasurukirwa,
kunyarara uku kwandinako,
kuti kana Mwari achizvida tinoneta mumuviri,
nekuti zvese zvakafanana uye unozviziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Luis Rosales. Nyanduri weChizvarwa cha '36. Nhetembo Dzakasarudzwa